Steam Wallet Code USD - Codashop
သင်၏ ဂိမ်းအတွက် ငွေးပေးချေရန် အမြန်ဆုံး အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ဝယ်လိုက်ပါ။
Not in Myanmar?
Steam Wallet Code USD
SOLD OUT. You can buy Steam Wallet Code THB here.
Steam Wallet ကုဒ်များကို သင်၏ MPT, Telenor, Red dot Pay PIN နှင့် Wave Money ဖြင့် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Account ထဲဝင်ရန် မလိုပဲ ငွေပေးချေပြီးလျင် ကုဒ်နံပါတ်ကို သင် email သို့ ချက်ချင်းပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် သင်၏ Steam Wallet ကို အမြန်ဆုံးငွေပြန်ဖြည့်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းဘတ် (Baht) ငွေတန်ဖိုးဖြင့် ပြထားသော Steam Wallet Code ကို ဝယ်ယူလိုပါသလား? သင်၏ Steam အကောင့်သို့ မည်သည့် ငွေကြေးအမျိုးအစားကုဒ် နှင့်မဆို ငွေပြန်ဖြည့် နိုင်ပါသည်။ ကုဒ်၏ ငွေကြေးသည် သင့်အကောင့်၏ ငွေကြေးအမျိုးအစား နှင့် မတူညီပါက၊ သင်ငွေပြန်ဖြည့်သည့်အခါ သင့်အကောင့်နှင့်တူညီသော ငွေကြေးအမျိုးအစားသို့ ပြန်ပြောင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT နံပါတ်ဖြင့် ငွေပေးချေမည်
Wave Money ဖြင့် ပေးပါ။
လိပ်စာကို မှန်ကန်အောင်ထည့်ပါ၊ ၄င်းလိပ်စာသို့ ဘောက်ချာ ကုဒ်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Steam Wallet ကုဒ်များကို လွယ်ကူသော အဆင့် (၃) ဆင့်ဝယ်လိုက်ပါ။
သင်သည် Steam Wallet ကုဒ်ဝယ်ရန် စက္ကန့်ပိုင်းသာလိုအပ်ပါသည်။ သင်၏ဝယ်ယူမှုကို ပြီးမြောက်စေရန် မိမိအသုံးပြုမည့် ငွေချေစနစ်ကို ရွေးလိုက်ပါ၊ ထိုနောက် သင်၏ email လိပ်စာထည့်ပါ။ သင်၏ဖုန်းဖြင့် ငွေပေးချေမှု ကို အတည်ပြုလျင် သင့်ဖုန်း Screen ပေါ်တွင် ကုဒ်နံပါတ်ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုဒ်ကို သင်၏ email လိပ်စာသို့လဲ ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းများမေးရန်ရှိပါက ၂၄/၇ [email protected] ကို ဆက်သွယ်ပါ (သို့) Facebook စာမျက်နှာကိုလည်း သွားကြည့်နိုင်ပါသည်။
© 2019 Coda Payments PTE LTD
တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသော အချက်များ မှားသွားသည် (သို့) လွှတ်သွားသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဘောက်ချာ တန်ဖိုးရွေးပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ငွေပေးချေမှုစနစ် ရွေးပါ
ကျေးဇူးပြု၍ တရားဝင် e-mail လိပ်စာ ထည့်ပေးပါ